Topimaso - Trump Eco Technology Co., Ltd.
Geomembranes fametahana tena
Tetikasa momba ny harena ankibon'ny tany
Tetikasa lasantsy solika
Fananganana sy tafo
Tetikasa Dam & Lake
Trump Eco Technology Co., Ltd. dia orinasa lehibe mirotsaka amin'ny fikarohana, famokarana ary fivarotana geosynthetics ary fitaovana tsy misy rano macromolecule. Nanomboka nanolotra vahaolana momba ny famonoana rano ny orinasa nanomboka ny taona 1983 ary nanomboka nanamboatra ny vahaolana famonoana rano natokana ho azy hatramin'ny 2001. Miaraka amin'ny renivohitra voasoratra 15 tapitrisa dolara amerikana ary taorian'ny fandrosoana nandritra ny 30 taona mahery, dia manana ekipa mpikaroka siantifika matanjaka, fotodrafitrasa famokarana mandroso sy dingana, hentitra ny orinasa. rafitra fitantanana kalitao sy rafitra fanaraha-maso mandroso. Ny vokatra rehetra dia manaraka tanteraka ny ASTM, GRI, CE ary ny fenitra iraisam-pirenena hafa.
Ireo vokatra kalitao ireo dia ahitana ny geomembrane HDPE, ny membrane PVC, ny membrane TPO, ny geotextile ary ny fitaovana tsy tantera-drano hafa. Ny vokatra dia be mpampiasa amin'ny fiompiana anaty rano, fanariam-pako, fitrandrahana harena an-kibon'ny tany, fikolokoloana rano ary tetikasa fanamainana hafa. Nanangana ny lazanay izahay ary nahazo ny fahatokisan'ny mpanjifanay amin'ny fanomezana hatrany ny entana tsara kalitao.
Nandritra ny taona maro dia nanangana fahalalana fahalalana miavaka izahay. Afaka manampy anao amin'ny torohevitra matihanina izahay ary manome anao vahaolana marina ho an'ny tetikasanao miantoka ny fahavitan'ny fotoana.
Manome vahaolana tsy misy rano hatramin'ny 1983.
Renivohitra voasoratra anarana maherin'ny 15 tapitrisa
Miara-miasa amin'ny ekipa matihanina ianao
Trump Eco Technology Co., Ltd. dia orinasa lehibe mirotsaka amin'ny fikarohana, famokarana ary fivarotana geosynthetics ary fitaovana tsy misy rano macromolecule.
Adiresy: No.32, tranon'ny birao fanaovana lovia, Jinke Road, Distrikan'i Jinniu, Chengdu, Sina 610036